MTS in AVI - Sida loo rogo ama MTS in AVI la MTS in AVI Converter t
> Resource > Beddelaan > Sida loo rogo ama MTS in AVI
Ma uun ka soo laabtay fasaxa, qalin ama xisbiga helay? Ma jeclaan lahayd in aad rabto inaad la wadaagto daqiiqado ku faraxsan in uu ku diiwaan-aad fiidiyo, online doonaan qoysaska ama saaxiibada? Mise waxaad doonaysaa inaad si dajiyaan clips in ay boosteejo ah oo video tafatirka in kaliya taageeraa qaab file AVI ah? Tutorial Tani idinku hanuunin ku saabsan sida ay u badalaan kuwa files MTS in AVI la a video Converter xirfad weli si sahlan loo isticmaalo.
Qaybta 1aad: Sida loo rogo ama MTS ah in AVI
Qeybta 2: Free MTS in AVI Converter
Qeybta 3: Online MTS in AVI Converter
Qeybta 4: Extended Knowlege u MTS iyo AVI
Qeybta 1: MTS Best in AVI Video Converter
Taageerada kordhin file AVCHD ee sida MTS iyo sidoo kale M2TS.
Upload files si toos ah uga fiidiyo.
Ilaa diinta Ultra-degdeg ah 30 jeer.
Editor laga heli karaa hal madal ay.
Sida loo badalo MTS ah in AVI
Fadlan ka Tallaabada mid ka mid ah diinta si toos ah uga soo AVI ah in qaab file VOB raaco. Haddii kale, u gudub Tallaabada 3 gubanaya files AVI aad galay DVD ah.
1. files Upload MTS (xirmaan fiidiyo ugu PC)
Connect camera HD video ama fiidiyo si aad PC la cable USB ah. Marka xiran oo ku shaqeeya on, fiidiyo si toos ah ka muuqan doontaa desktop-ka. Waa in aad nuqul videos ay u wadid aad PC ee ay adag tahay ka hor inta diinta ama iyaga sixiddiisa la jecel yahay. Riix dar files xitaa u files iyo dar files MTS aad rabto in aad si loogu badalo gal barnaamijka. On top of in, diinta Dufcaddii ayaa sidoo kale taageeray by this video MTS Converter, si aad u gali kartaa dhowr files MTS isku mar.
2. Edit MTS files on software la mid ah
Tani MTS Video Converter kaa caawin kara inaad jar, isku shaandheyn iyo video dalagga. Waxa kale oo jira qaababka kale si ay kaaga caawiyaan in aad ku darto saamaynta, watermarks, Cinwaan iyo xitaa ku milmaan files badan galay mid ka mid file hal ka hor inta qaab beddelidda.
3. Customize saarka goobaha
Ka dib markii in, waxaad dooran kartaa qaab wax soo saarka ah ee qaab beddelidda iyo sheeg tusaha (on your computer) sida meesha aad jeclaan doonaa si loo badbaadiyo files wax soo saarka. Video Converter Ultimate Tani waxay taageertaa qaabab outpu video dhamaystiran oo ay ku jiraan AVI, MPEG, wmv, MP4, MOV, XviD, 3GP, FLV iyo wax ka badan. Si fudud u riix badalo badhanka si ay u bilaabaan diinta ka dibna ha shuqulka hawsha u sameeyo.
Converter ayaa i qabtay wax yar ka badan 25 daqiiqo iyada oo 700 MTS videos leh tayo la taaban karo oo wanaagsan. Si kastaba ha ahaatee, xawaaraha diinta inta badan waxay ku xiran tahay goobta video asalka ah iyo qaabeynta aad PC ee. Inkasta oo video ah la gediyay ma inuu aqoonsado mid ka mid ah asalka (HD video), tayada hubaal wuxuu la kulmi doonaa baahida user ugu ee.
Qeybta 2: More fursadaha: MTS Free in AVI Converter, Online MTS in AVI Converter
# 1. Free Video Converter: Wondershare Free MTS in AVI Converter
Halkii AVI, waxaad had iyo jeer dooran karaan presets kale filaayo, si loo waafajiyo playbacks doorashada aad door bidayso ama qalabka la qaadi karo.
Pro: Waa imisa kharashka? Waxba!
1. Hawlaha ayeey xadidan yihiin.
2. Ma awoodo in uu abuuro ama aad DVD u gaar ah.
3. Taageero No in sanaanayaa metadata.
Qeybta 3: WMA Online in Lugood Converter
Qeybta 4: Aqoonta Extended u MTS iyo AVI Qaabka
MTS waa waqti dheeraad ah in uu caadi ahaan loo isticmaalo si loogu kaydsado videos qeexitaanka sare duubay DVD ama kaamirada AVCHD. AVI waa weel multimedia ay ku jiraan xogta audio iyo video labadaba. Waxa ay u ogolaataa audio-la-video loo maqli synchronous. Files AVI taageeraan badan audio geeyo iyo video
Kala duwan Cyberlink Players
Blu-ray cajalid Association Microsoft
Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan qaabka file MTS
Sida loo badalo files AVI on Mavericks
Sida loo Guba AVI in DVD on Windows 8
Top 3 AVI Players u Mac Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan qaab file AVI ah
Top 3 AVI Players u Mac
Sida loo rogo ama MTS in FLV